“Kama qoomameynayo ka tagista kooxda Arsenal” – Olivier Giroud – Gool FM
(London) 13 Okt 2019. Weeraryahanka reer France iyo kooxda kubadda cagta Chelsea ee Olivier Giroud ayaa xaqiijiyay inuusan dareymin wax qoomamo ah ee ku aadan go’aankii uu kaga soo dhaqaaqay naadiga Arsenal.
Olivier Giroud ayaa muddo dhan shan sano iyo badh ku qaatay kooxda ka dhisan Waqooyiga magaalada London ee Arsenal, ka hor inta uusan u dhaqaaqin garoonka Stamford Bridge ee dhaca Galbeedka magaalada London bishii Janaayo ee 2018-kii.
Waxaa yaraatay fursadaha Olivier Giroud uu doonayay inuu ka helo tababare Frank Lampard, iyadoo macalinka reer England uu ku tiirsan yahay adeega weeraryahanka da’ada yar ee Tammy Abraham, taasoo ka dhigtay in Giroud uu ciyaaray kaliya labo kulan xilli ciyaareedkan.
Haddaba Olivier Giroud ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay asbaabihii ku kalifay inuu ka dhaqaaqo kooxda Arsenal wuxuuna yiri:
“Ma aysan fududeen inaan ka tago Arsenal, isla markaana aan aado Chelsea labo sano ka hor sababtoo ah waan jeclaaday Gunners”.
“Laakiin waxay aheyd horumar maxaa yeelay Chelsea waxa ay ku guuleysatay koobab badan oo England ah sida Manchester City tobankii sano ee la soo dhaafay”.
“Waxaa jiray tartan ku saabsan weerarka kooxda Chelsea, iyadoo ay kooxda joogeen Alvaro Morata iyo Gonzalo Higuaín, ugu dambeyntii waxaan ku guuleystay inaan boos ka helo kooxda, waxaana ciyaaray finalka FA Cup ee 2018 iyo finalka Europa League ee 2019”.
Halyeey kooxda Liverpool ah oo amaan kala dul dhacay xiddiga reer Senegal ee Sadio Mane